Serenity Gardens Pondy-Suite 2 Agni (Umgangatho ophantsi)
Igumbi lakho lokulala e indlu yodaka sinombuki zindwendwe onguNishchal
I-Serenity Gardens Studios ikhuthazwe luyilo lwangoku noluzinzileyo, phakathi kwegadi ekhulayo. Ilula kwaye i-minimalist kwaye ibonisa ukuzibophelela ezantsi kwiimvakalelo zobuhle bomhlaba. Amagumbi asebenza ngokukhululeka ngaphandle kokubandakanya ubulula. Ulwandle, inxalenye ebalulekileyo yobomi ePondicherry kukuhamba nje imizuzu embalwa.
Iingcamango zale mihla kodwa zincinci, igumbi lixhotyiswe kakuhle ngezinto eziyimfuneko ukuze uhlale kamnandi. Igumbi ngalinye lineebhedi ezimbini zomntu omnye, igumbi lokuhlambela elincanyathiselweyo kunye nendawo yegunjana enkulu ngokwaneleyo ukuba ikwazi ukuhlalisa izinto. Amanzi ashushu kwitephu nakumanzi okusela nakwigumbi leti nekofu amalungiselelo okwenza akhona.
Ulwandle luyi-5 min ukuhamba ukusuka kwipropathi. Ukuqubha elwandle akucebisi njengoko imisinga yangaphantsi ingalindelekanga. Nceda uhlale kufutshane nonxweme.
Kukho izikolo ezimbalwa ze-surf elunxwemeni zabo banomdla.
Ukutya akufumaneki kwisakhiwo kodwa iSwiggy, Uber Eats kunye neZomato ziyahambisa.
Umbuki zindwendwe ngu- Nishchal
I-Nishchal iyafumaneka kwiifowuni kunye nemiyalezo. Uyasabela kakhulu. Ekubeni ehleli ePondicherry ixesha elininzi lobomi bakhe kwaye eqhuba iarhente yohambo losapho, ukuxhotyiselwe kakuhle ukucebisa ezona zinto zilungileyo anokuzenza kwidolophu yonke kwaye uyakwazi ukunceda ngokubhukisha iteksi kunye nokhenketho ekuhlaleni.
URaju kunye nosapho lwakhe bahlala kwisakhiwo kwaye bayafumaneka ukuze balungise iimfuno zangoku. Unokunceda ukufowunela imoto okanye ngokuqesha amavili amabini.
I-Nishchal iyafumaneka kwiifowuni kunye nemiyalezo. Uyasabela kakhulu. Ekubeni ehleli ePondicherry ixesha elininzi lobomi bakhe kwaye eqhuba iarhente yohambo losapho, ukuxhotyiselw…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kottakuppam